ZArchiver bụ onye njikwa faili dị ike maka gam akporo | Gam akporosis
ZArchiver, onye njikwa faili dị ike nke na-enye gị ohere ịmepe ụdị ụdị niile
Na gam akporo anyi nwere ES File Explorer dika quintessential faịlụ nchoputa Ọ nwere ihe magburu onwe interface na kemgbe otu n'ime ndị kasị arụnyere na Play Store imeghe nile di iche iche nke faịlụ. Ma mgbe ụfọdụ, mgbe ị na-emeghe dị otú ahụ obere faịlụ Ọkpụkpọ, ị nwere ike nyefere ndị ọzọ ozi a dị ka nke anyị na-eweta na Mọnde a ma ọ bụghị onye ọzọ karịa ZArchiver.
ZArchiver Ọ gaghị apụta ìhè maka inwe interface kachasị mma ma ọ nweghị Nhazi Ihe, ma ikike ya dị na ikike ọ nwere imeghe ụdị faịlụ niile dịka ISO ma ọ bụ TAR. Ọ bụrụ na onye njikwa faili gị anaghị emepe usoro, ịnwere ike ịwụnye ZArchiver, ngwa nke anyị ga-enyocha ntakịrị n'elu.
1 Ngwa jọgburu onwe ya ma bara ezigbo uru
2 Mmachi imepụta faịlụ ZIP
Ngwa jọgburu onwe ya ma bara ezigbo uru
Oge ị rụnyere ma malite ngwa a ị ga-amata nke ahụ ọ baghị uru n ’ụdị faịlị ị chọrọ imeghe, ebe ọ bụ na ọ ga-arụ ọrụ zuru oke, nke a bụ njirimara ya na ndị isi ndị ọzọ ma ọ bụ ndị nyocha faịlụ.
E wezụga nke ahụ, site na oge mbụ, na interface abụghị onye ị ga-egosi ndị enyi gị, na-adị mfe jikwaa faịlụ na folda gị niile. Site n'elu ya ị nwere ike ịnweta nchekwa dị n'ime ma ọ bụ kaadị micro SD n'onwe ya. ZArchiver nwere ohere iji usoro faịlụ .zip na .7z wee pịa ogologo na faịlụ ị na-ahọrọ nhọrọ "Mpikota".
The nhọrọ ị ga-mpikota onu faịlụ ndị ahụkarị ndị ị nwere na kọmputa si na mkpakọ rue ultra. Dị ka ọ na-emekarị na nhọrọ mkpakọ ndị a, ịnwere ike ịgbakwunye paswọọdụ iji tinye nchekwa na faịlụ Zip ahụ ị mepụtara.
Mmachi imepụta faịlụ ZIP
Otu n'ime agaghị emeli na ngwa nwere bụ mgbe ọ na-emepụta faịlụ ZIP, ebe ọ bụ na ọnụọgụ nhọrọ enweghị oke 7z (7zip), zip, bzip2 (bz2), gzip (gz), XZ na tar. Agbanyeghị na ohere dịwanye elu mgbe ị na-elele ma ọ bụ dezie faịlị emeela, nwee nnukwu ndepụta nke usoro iji mepee. Omume ya ọzọ bụ na ọ nwere ike kewaa faịlụ dịka 7z.0001, zip.011, wdg.
ZArchiver nwere pro pro nke na-enye gị ohere iji otu isiokwu ehihie na abalị, na n'ozuzu ọ bụ a ezigbo njikwa faili dị ike maka gam akporo. Ọbụna ọ na-enye nkwado dị iche iche maka ngwaọrụ nwere ihe karịrị otu CPU, na-enwe ike ịhọrọ nke isi anyị chọrọ iji chekwaa faịlụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » ZArchiver, onye njikwa faili dị ike nke na-enye gị ohere ịmepe ụdị ụdị niile
Diego LV dijo
Ọfọn, n'eziokwu, ọ dị ka ọ mara mma karịa ES File Explorer, n'eziokwu, anaghị m elo interface nke onye nyocha faịlụ ahụ.
Aga m anwale ya, ka m na-eji IO File Explorer ugbu a, ya na interface yiri ya.
Zaghachi Diego LV
Ga-agwa anyị otu mmetụta gị dị. Na ọtụtụ ihe onwunwe imewe anyị na-echefu na ihe dị mkpa bụ nwere!
Piktures, nnukwu onyonyo mara mma rụpụta